The itsva dzakati PHANTOM kuchaita kukwikwidzana Mheni Network - Tray News - Blockchain News
The creators of protocols SPECTER uye Ghost Jonathan Sompolinski uye Aviv naZohari akarondedzera dzakati itsva chinyorwa rakabudiswa svondo rino. The PHANTOM dzakati anovimbisa rakavimbika simbiso kwema “chero samambure bandwidth”, kusanganisira ngwara zvibvumirano. The kukura itsva inobva yapfuura mhinduro kubva murayiro iwoyo, SPECTER, iyo ngaubve tsika chinogumbura maumbirwo bitcoin uye anoshandisa zvakawanda scalable “akatungamirira acyclic misa calculators” (blockDAG). Vanotsvakurudza anorondedzera mabikirwo sezvo “kuti kungotaurawo of Satoshi cheni, riri nani akakodzera kuti kwegadziriro kutsanya kana yakawanda inoperera.”
Kusiyana is zvingaitwa dzakadai Mheni Network, kana kwema zvinoitiswa pamusoro wedzera-mberi Network, Phantom inopa mhinduro yeGmail.END_STRONG-kwakavakirwa unokubvumira kusiya zvose transactional mashoko pamusoro blockroom.
Maererano nevanyori, huru runoratidza PHANTOM ndechokuti rinoitawo kuti Linear arayira kuti zvinogumbura, izvo SPECTER haana kubvumira. For ichi, anoshandisa “vanokara algorithm” pamusoro blockDAG pachikuva uye chinosiyanisa zvinogumbura kunotangira “akatendeseka” nodes kubva “non-pamwe” nodes kuti tsaukai mugodhi dzakati. Sezvo Developers kunyora, musiyano uyu zvinobvumira zvose “vakatendeseka nodes” kusvika nekubvirana. Kugadzirisa dambudziko Linear arayira achibvumira PHANTOM kuti kukwira chero kukarukureta, kusanganisira ngwara zvibvumirano.
Sompolinski naZohari vanoziva kuti nokuda Linear arayira, PHANTOM zvibayiro kuti kutengeserana nokusimbisa mwero, yakanga yakakwirira yokutanga SPECTER dzakati. Asi vatsvakurudzi kuenda kugadzirisa dambudziko iri basa ramangwana.
Previous Post:Canada yokutanga Blockchain ETF anotendwa regulators
Next Post:Litecoin ndiye